महाभारतजस्तो स्थापित कथामाथि आख्यान तयार गर्दा लेखक निश्चित आग्रहले प्रेरित हुने सम्भावना रहिरहन्छ । कथाका उत्कर्ष र घुम्तीहरू पहिल्यै निर्धारित भइसकेकाले पात्रका मनोदशाको वर्णनमा पछिल्ला घटनाको पश्चदर्शी प्रभाव पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । ‘महासमर शृंखला’ पढ्दै गर्दा कोहली पनि यस्ता समस्याको चपेटाबाट मुक्त भएको भान हुँदैन । समकालीन मनोविज्ञानद्वारा त्यो समाजका पात्रहरूको मनोदशालाई विश्लेषण गर्ने प्रयास पुनर्कथनको अर्को समस्या हो । सत्यवतीमा सौतेनी द्वेषको उत्कर्ष देखिनु समकालीन समाजको प्रतिविम्ब हो कि त्यो समाजको चित्रण हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । पाण्डुपत्‍नीद्वय माद्री र कुन्तीमा पनि प्रच्छन्न रूपले सौतेनी आग्रह देखाइएको छ । द्रौपदीमा पनि सौतेनी द्वेषको झिल्का देखिन्छ । सौताको अवधारणा त्यो समाजमा कस्तो थियो भन्ने प्रश्नलाई लेखकको आग्रहले छायामा पारिदिएको त होइन ? सत्यवतीले व्यासको जन्म र कुन्तीले कर्णको जन्मलाई किन गोप्य राख्‍नुपरेको ? सत्यवतीले पराशरसँग सम्बन्ध राखेको घटनालाई सत्यवतीकी आमा छोरीको शत्रुवत् व्यवहार बताउँछिन्। सत्यवतीले पराशरसँग सम्बन्ध राख्‍नुपर्नाको के बाध्यता के थियो भन्ने कुरालाई रहस्यको अस्पष्ट पर्दाभित्रै राखिदिएका छन् लेखकले ।
महाभारतभित्र कथाहरूको प्रवाह र संगतिमा प्रशस्त समस्या छ । कोहलीले कतिपय छिद्रहरूलाई टाल्न खोजेका छन् भने कतिपयलाई जस्ताको तस्तै स्विकारेका छन्, मूल कथामा भएका अन्तरविरोधलाई छिचोल्ने प्रयास पनि गरेका छैनन् । नवौँ खण्डमा उल्लेख गरिएका स्वीकारोक्तिको सापेक्षमा हेर्दा लेखक कथाभित्र स्वच्छन्द रूपले सक्रिय हुन नखोजेको हो कि भन्ने भान पर्छ । महाभारतका पात्रमाथिका लेखकका छुट्टाछुट्टै प्रकाशित कृति र प्रस्तुत शृंखलाका अंशहरू हुबहु दोहोरिएका छन् । फुटकर कृति पढिसकेका पाठकलाई यो शृंखला पढ्दा ती ठाउँमा झर्को लाग्‍न सक्छ । तथापि महाभारतजस्तो भयंकर कथा र तिनका पात्रलाई सुहाउँदो परिवेश खडा गरेर सरलतम ढंगबाट प्रस्तुत गर्नु असाधारण लेखनीको परिणाम हो भन्नेमा चाहिँ कुनै द्विविधा छैन । लेखकले परिवेश र संवादलाई आकर्षक ढंगले पुनर्निर्माण गरेका छन् । व्यावहारिक जीवनका कटु सत्यलाई सुन्दरतम ढंगबाट उजागर गरिएका प्रशस्त दृष्टान्त भेटिन्छन् । महाभारतको पुनर्कथन अन्य ग्रन्थहरूको सहयोगबिना एक्लो महाभारतबाट मात्र सम्भव हुने कुरा होइन । यस अर्थमा प्रस्तुत ‘महासमर’ शृंखलालाई नरेन्द्र कोहलीको असाधारण सिर्जना भनेर स्विकार्नु अत्युक्ति हुँदैन।